प्रेमले अंग–प्रत्यंग हेर्दैन-रेखा थापा | Screennepal
प्रेमले अंग–प्रत्यंग हेर्दैन-रेखा थापा
२०७१, ११ आश्विन शनिबारscreennepalInterview0
रेखा थापा सदा चर्चाको केन्द्रमा हुन्छिन् । फरक यत्ति हो, अरू ‘उनी जे गर्छिन् चर्चाका लागि गर्छिन्’ भन्छन् । उनी चाहिँ ‘म जे गर्छु त्यसलाई चर्चाको विषय बनाइन्छ’ भन्छिन् । रेखा अभिनीत फिल्म ‘हिम्मतवाली’ असोज १५ मा रिलिज हुँदै छ । यतिबेला रेखा र त्यही फिल्मका अभिनेता सुदर्शन गौतमको प्रेमको चर्चाले बजार गर्माएको छ । यही फिल्मबाट डेब्यू निर्देशक रेखा र डेब्यू अभिनेता सुदर्शनसँग धनबहादुर खड्काको कुराकानीः
यसपल्ट दुइटै हात नभएका सुदर्शन गौतमलाई फिल्मको हिरो बनाउनुभएको छ । उहाँ तपाईंको फिल्मको कथाले चाहेको पात्र हो कि चर्चाको नयाँ अस्त्र ?
मूलतः फिल्म मनोरञ्जनका लागि बनाइन्छ । यसपल्ट मैले फिल्ममा मनोरञ्जनका साथै सन्देश पनि प्रवाह गर्ने सोच बनाएँ । ‘जीवन काँडा कि फूल’ पढेपछि मलाई झमक घिमिरेलाई ‘हिरोइन’ बनाउने सोच पैदा भएको थियो । तर, उहाँको स्वभाव थाहा पाएपछि प्रस्ताव गर्न डराएँ । सुदर्शनलाई भेटेपछि चाहिँ मेरो त्यो सोचले पूर्णता पाउनसक्ने सम्भावना देखेँ । यो फिल्ममा उनलाई लिएर हरेक मान्छे आफैँमा हिरो हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजेकी हुँ ।
तपाईंले चाहेको सन्देश धेरैमाझ प्रवाह हुनका लागि पनि त फिल्म ‘चल्नु’पर्छ । चकलेटी अनुहार र सुन्दर ज्यान बनाएका हिरो हेर्ने नेपाली दर्शकमाझ उहाँलाई ‘हिरो’ लिएर फिल्म बनाउनु तपाईंलाई दुस्साहस जस्तो लागेन ?
परिवारका सदस्यलाई मेरो योजना सुनाएपछि उनीहरूले ‘तँ बौलाइस्’ भने । यो फिल्म पैसाका लागि होइन, सन्देशका लागि हो । मैले धेरै पाखुरा चलाउने हिरो जन्माएँ । ती फिल्म हेरिए पनि । यसपल्ट सुदर्शनलाई हिरो बनाएर दुस्साहस गरेँ नभनौँ, साहसको पराकाष्ठा चाहिँ हो यो । मलाई यो फिल्मबाट पैसा चाहिँदैन । एउटै चाहना भनेको हीनताबोधबाट गुज्रेका धेरैभन्दा धेरै युवाले फिल्म हेरेर आफूलाई ऊर्जावान् बनाउन् ।
चर्चा र अन्य लोभबाट प्रेरित नभएर फरक क्षमता भएकामध्येबाट हिरो बनाउनु थियो भने यसअघि पनि त्यस्ता व्यक्ति भेट्नुभएको थियो होला !
सुदर्शन रियल हिरो हुन् । उनको ‘हिरोइजम’ युट्युबमा एक्सेस भएकाहरूले देखिसकेका छन् । तर, प्रविधिसँग नजिक नहुने ठूलो नेपाली समुदायलाई दुइटा हातबेगर नै उनले हासिल गरेका सफलता देखाउनुथियो । म फिल्म क्षेत्रमा भएकाले मात्रै होइन, यसका लागि उपयुक्त माध्यम पनि फिल्म नै हुन्थ्यो । महिलालाई बेसहारा भनिन्छ । तर, उसलाई उसको श्रीमान्, परिवारले संरक्षण गरिरहेकै छ । अहिले कोही बेसहारा छ भने ती बेरोजगार युवा हुन् । उनीहरूलाई केही गर्ने हिम्मत जुटाउनका लागि सुदर्शनजस्ता दुई हात नभएर पनि केही गर्ने कोसिस गरिरहने युवा प्रेरणाका स्रोत बन्न सक्छन् भन्ने लाग्यो । महिलाका लागि हिम्मत दिने त म छँदै छु । उनीसँग भेट भएपछि उनको तस्बिर हेरेँ । ती कलात्मक थिए । त्यसैले पनि हिरो बनाउने हिम्मत जुटाएकी हुँ । सुदर्शनलाई हिरो बनाएपछि उनीबाट ‘टू इन वान’ काम भएको छ– प्रेरणा र मनोरञ्जन ।
तपाईंलाई तर्क पनि दिन सकिने र चर्चा पनि भइरहने यस्ता उपक्रम खूब फुर्छन् है !
मैले चर्चाका लागि यस्ता काम गर्दिनँ । मेरा यी कामबाट आफूलाई चर्चामा ल्याउन अरूले नै चर्चा गरिदिन्छन् । म जे गर्छु, त्यसको चर्चा हुन्छ । तर, म अब पनि चर्चाको लोभ गर्नुपर्ने अवस्थामा छैन । १२ वर्षदेखि फिल्म क्षेत्रमा छु र चर्चामा पनि । रेखा थापा को हो ? भनेर सोध्दा सात वर्षको बालकले उत्तर दिने अवस्थामा रहेकी म किन चर्चाको लोभ गरूँ ?
तर, पछिल्लो तपाईंको कामले अघिल्ला कामहरू बिर्साइदिन्छन् । तपाईं आफैँले महŒव दिएजस्तो पनि देखिँदैन । जस्तो, राजनीति, रेखा थापा फाउन्डेसनमार्फतका समाजसेवा इत्यादि ।
म त अहिले पनि राजनीति गरिरहेकी छु । त्यतिबेला चुनाव थियो र म सभामा भाषण गर्थें । अहिले कहाँ गएर भाषण गरूँ ? मेरो कर्म फिल्म हो । त्यही कर्मबाट समाज परिवर्तनका लागि ‘फरक क्षमता भएका’लाई हिरो बनाएर युवालाई सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दै छु । सुदूरपश्चिमको सौन्दर्य र संस्कृतिलाई फिल्ममा समेटेर फैलाउनुपर्छ भनेर मैले सुदूरपश्चिमको पिपलाडीमा गएर सुटिङ गरेँ । भव्य लोकसन राखेर फिल्म बनाउनु थियो भने विदेशका विभिन्न देशमा गएर गर्न सक्थेँ । राजनीति र समाजसेवाको मूल उद्देश्य यो भन्दा फरक छ र ?
सुदर्शन र तपाईंको चक्कर चलिरहेको छ ?
एस, म सुदर्शन गौतमलाई प्रेम गर्छु ।
तपाईं आफै सार्वजनिक गरिरहनुभएको छ । प्रेम चर्चाको विषय हो ?
होइन । र, म पनि ड्रामेबाज केटी होइन । जीवनमा पहिलोपल्ट प्रेममा परेँ र पहिलोपल्ट सार्वजनिक पनि गरेँ । मैले यो प्रेम सार्वजनिक गरेर एउटा सक्षम महिलाले प्रेम गर्नका लागि जातभात, अंगप्रत्यंग हेर्दिन भन्ने देखाउन खोजेकी हुँ । त्यसमाथि सुदर्शन त्यस्तो मान्छे हो, जोसँग तपाईं दुई घण्टा बस्नुभयो भने आफँै प्रेम गर्न थाल्नुहुन्छ ।
फेसबुक स्ट्याटसमा प्रेम–संवाद चलाउनुभयो । त्यो त चर्चाको लोभजस्तो देखियो नि ?
फिल्म ‘हिम्मतवाली’को गीत थियो त्यो । त्यही अनुसार सुदर्शनले काउन्टर दिइरहेका थिए । जुन अहिले रिलिज भइसकेको छ, सुन्दा थाहा हुन्छ । ‘लभ यू बाबा’ मैले मेरो बाबालाई भनिरहेको छु, फिल्म भित्र । अर्काे कुरा म त्यस्तो फिल्डमा छु, जहाँ एक न एक दिन प्रेम थाहा हुन्छ । मैले भित्रभित्रै प्रेम गरेर चक्कर चलाएर बाहिर ‘असल साथी हौँ’ भन्ने ढोँग त गरिनँ नि । सत्य स्विकारिदिएँ । मलाई लाग्छ, यस्ता कुराको जानकारी अरूलाई दिनुपर्छ । किनभने, पुरानो रीतिअनुसार पनि बिहे सबैलाई देखाउन÷सुनाउनकै लागि बाजा बजाएर गरिन्छ ।
सुदर्शन गौतमसँग जिस्किदै रेखा थापा
तपाईंहरूबीच प्रेम छ । बिहे पनि हुन्छ ?
बिहेका लागि प्रेम गरिन्छ भने त्यो त स्वार्थ भइगयो नि । मलाई यत्ति थाहा छ, हामीबीच स्वच्छ प्रेम छ ।
हाम्रो समाजले विवाहअघि शारीरिक सम्बन्धलाई त्यति राम्रो मान्दैन । त्यसकारण शारीरिक आवश्यकताले पनि त्यो हदसम्म पु¥याउला ?
त्यसबारे मैले सोचेकै छैन । तपाईंले पो घचघच्याइदिनुभयो त !
सँगै बस्नुहुन्छ, विदेश जानुहुन्छ । एकजोडी प्रेमीको यो लेभलको प्रेम र बसउठमा शारीरिक आवश्यकता बोध नै नभएको कुरा कसरी पत्याउने ?
म त्यस्ता कुराबाट गुज्रिएकी छैन । त्यसैले त्यस्तो भएको छैन । विश्वास गर्ने÷नगर्ने त्यो सोच्नेका लागि फ्री छाडिदिऊँ ।
बजारमा अर्काे हल्ला पनि छ । यो फिल्ममा लगानी सुदर्शनको छ । सुदर्शनको पैसाका कारण पनि तपाईं आकर्षित हुनुभएको हो रे ?
यो देशमा रेखा थापा त्यस्तो केटी हो, जसलाई पैसाको ‘प’ले छुँदैन । स्मरण रहोस्, पैसाको पछि कुद्ने भएको भए म गौरीघाट (छवि ओझाको घर) मै हुन्थेँ । मलाई थाहा छैन, सुदर्शनसँग पैसा कति छ । मैले यो फिल्ममा उसलाई पारिश्रमिक दिएरै फिल्म खेलाएकी हुँ । हिरोलाई कति पारिश्रमिक दिन्छु भन्ने कुरा मेरा अघिल्ला फिल्मका हिरो किशोर खतिवडालाई सोधे पनि थाहा हुन्छ ।
तपाईंका माथिका भनाइअनुसार तपाईं सदैव असल मार्गमा हिँडिरहनुभयो । तर, बजारमा तपाईंको इमेज अर्कै किन बन्यो ?
फिल्मको पर्दामा देखिएकी ह्यांकीप्यांकी रेखा थापालाई हेरेर बजारले मेरो इमेज बनाइदियो । रियल रेखा थापा कसैले चिन्ने कोसिसै गरेन । तर, पनि मेरो इमेजबाट म असन्तुष्ट छैन ।
Previous Postदशैंलाई ‘अचार करेली’ (फोटोपिचर) Next Postगुनगुनाउँने बानीले बनेकी गायिका